IProPods Pro yee-euro ezingama-190 sisipho | Ndisuka mac
IProPods Pro yee-euro ezingama-190 sisipho
Inyaniso kukuba sikuloo ndawo apho sithenga khona ii-headphone ze-Apple I-AirPods Pro inokuba sisivumelwano sokwenyani kwaye sinokuzifumana Iiwebhusayithi ezinje ngeAmazon nge-190 euro. Oku kunokuthetha ukuba utshintsho kwimodeli kungekudala, nangona kungekho datha ichanekileyo kule modeli, amanye amarhe akhombe kuhlaziyo olunokwenzeka.
Ngokwenyani ezi zi-headphone ze-Apple zaziswa ngo-Okthobha ophelileyo 2019 Zisebenza ngokupheleleyo kubasebenzisi abaninzi kwaye ixabiso abanalo ngoku libenza ukuba babe yimveliso yenkwenkwezi abanokuyinika okanye eyakho.
Ixabiso lehlisiwe ixesha elide kwaye kunokwenzeka ukuba liqhubeke ixesha elide. Ngokwam ndicinga ukuba azikho ii-headphone ezingcono kwi-iPhone nangaphezulu ukuba uqhuba imidlalo nabo, ngoku kuthiwa iApple inokumisela imodeli entsha ye-AirPods kodwa ingeyiyo i-AirPods Pro, ekulindeleke ukuba zifike kunyaka olandelayo, ke akukaze kube semva kwexesha ukonwabela ukucinywa kwengxolo, umgangatho wesandi abasinikezelayo, imo yesandi yokuma ukumamela isandi sangaphandle kunye nokulula konxibelelwano.
I-chip ye-H1 eyongezwe kwezi ntloko inika i-latency yomsindo ephantsi ngokungaqhelekanga, amandla anele kuninzi lwethu kwaye kukuba ngokubanzi ezi ntloko ze-Apple ziye zafezekisa ibhalansi egqibeleleyo phakathi komgangatho kunye nexabiso. Ngokukodwa kuthathelwa ingqalelo into yokuba kwiwebhusayithi ye-Apple baya kwi-279 euro kwaye kwesi sibonelelo Unokuzifumana nge-190 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » IProPods Pro yee-euro ezingama-190 sisipho
Uluhlu lwamva lwe-beta kawonke-wonke ye-MacOS Monterey
Izinto zisivumela ukuba sibandakanye uluhlu lweebhulethini kuhlaziyo lokugqibela